ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > Facebook Tutorial > ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 6:16 AM Facebook Tutorial
ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ Facebook ရဲ့ Setting ထဲကSecurity>>Where You’re Logged In စာမျက်နှာကို သွားရောက်ပြီး ကိုယ့်အကောင့်ကို အချိန်နဲ့ နေရာ အတိအကျနဲ့ ဘယ် Device ကနေ ဝင်သုံးသွားတယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့သော ဟက်ကာတွေကတော့ VPN ကျော်ပြီး Location ကို လိမ်ထားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ Acitivities တွေကို End Activity ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ Android ဖုန်းမှာတော့ အမှားလက္ခဏာ (Remove Button) လေးကို နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ရပါတယ်။ အဲ့လိုပြုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်တော့ ကိုယ့်အကောင့်ထဲဝင်ထားတဲ့ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကတော့ အကောင့်ထဲကနေ ခဏ Logged Out ဖြစ်သွားမှာပါ။
Credit-Paing A K (akhayar)
ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 6:16 AM Rating:5ကိုယ့် Facebook အကောင့် အဟက်ခံရတဲ့အခါ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ?? ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းအသုံးပြုနေရတဲ့ Facebook အကောင့်သာ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ခ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 6:16 AM